Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ၏ First Call Announcement အခမျးအနားကငျြးပ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
(၇၁)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက်အော်ပရေတာ တစ်ခုဖြစ်သော Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) ၏ First Call Announcement အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ၌ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong ၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ပြည်ပအော်ပရေတာနှစ်ခုဖြစ်သည့် Ooredoo Myanmar Ltd ၊ Telenor Myanmar Ltd နှင့် ပြည်တွင်းအော်ပရေတာများဖြစ်သည့် MPT နှင့် KDDI Summit Global Myanmar Company Limited တို့အား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် တိုးတက်လျက်ရှိသော လူဦးရေနှင့် ပညာရှင်များ၏အကြံပြုချက်များအရ စတုတ္ထအော်ပရေတာ ဖြစ်ပေါ်လာရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) အား စတုတ္ထမြောက် နိုင်ငံအ၀ှမ်းအော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် (Nationwide Telecommunication License)အား သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ စတုတ္ထမြောက်ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအတွက် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သော Viettel Global Investment Joint Stock Company Limited နှင့် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် Star High Company နှင့် MNTH Public Limited တို့သည် Joint Venture Agreement ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁ နှစ်နှင့် ၅ လအတွင်း လုပ်ငန်းများစတင်နိုင်ခြင်းသည် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို စေတနာအပြည့်ထားပြီး စိတ်အား ထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှိပြီးဖြစ်သည့် MECTel ၏ အခြေခံအဆာက်အဦများကို စနစ်တကျ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည်လည်း အဓိကအချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုသည့် အဓိကလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆို လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဖြင့် လူမှုစီးပွားများ လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့် လူ့ဘ၀တိုးတက်မှု အတွက်အသုံးချသကဲ့သို့ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ဂရုပြုသွားရန်လိုကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ယခုအခါစတုတ္ထအော်ပရေတာဖြစ်သည့် Mytel အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွင်သာမက ပြည်ပအော်ပရေတာများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Corporate Social Responsibility (CSR) လုပ်ငန်းများအနေဖြင့်လည်း Free Internet များ၊ Multi Media များနှင့် Tele-Center များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း Video Conferences များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ Operation Smile အမည်ဖြင့် Charity Program များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည့်ပြည်သူ့အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားလုပ်ငန်းတူ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ များတွင်လည်း လက်တွဲပြီးအကောင်းဆုံး ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Mytel ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ မြန်မာ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပိုမိုတိုးတက်သည်ထက် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ယနေ့မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel)အား စတင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကာ မင်္ဂလာရှိသော First Call Announcement Ceremony အခမ်းအနားကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြသည့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး၊ MIC ဥက္ကဋ္ဌ၊ MIC အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသအသီးသီးရှိ ၀န်ကြီးချုပ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၊ Viettel Group ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့တွင် (၇၁)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကို ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသော အားဖြင့် Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို စတင် ဖွင့်လှစ်မည့်မင်္ဂလာရှိသော First Call Announcement Ceremony အခမ်းအနားကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွက် အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံအနေဖြင့်လွန်စွာအကျိုးရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်ရွက်မှု၊ IT ၀န်ဆောင်မှုများကို အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်စိုးက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားကာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား PowerPoint ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်စိုး နှင့် CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Mytel Network အသင့်ဖြစ်နေမှုအား အသိပေးကြေငြာရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဦးသန့်စင်မောင်၊ ဦးဝင်းခိုင်နှင့် ဦးကျော်ဝင်း၊ စစ်ထောက်ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong ၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်စိုးနှင့် CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Mytel Network အားစက်ခလုတ်နှိပ်၍ ချိတ်ဆက်မှုဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။
ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ထံ Mytel Network ဖြင့် Video Call ဖြင့်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆို၍ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ညီညီဆွေ၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေးနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်တို့အား Video Call ဖြင့်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်က Mytel ရန်ကုန်ရုံးခွဲဒါရိုက်တာအား Mytel Network ဖြင့် Video Call ခေါ်ဆိုမှုအား ရုပ်ပုံနှင့်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ပြုလုပ်သည်။
၎င်းနောက် Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်စိုး၊ CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel)၏ First Call Announcement အခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအားပေးအပ်ပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) မှပြသထားသည့်ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ၏ Nationwide Telecom လိုင်စင်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ-ဗီယက်နမ်နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာဘက်မှ ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်အဖွဲ့(၁၁)ဖွဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးအစုရှယ်ရာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။
(၇၁)နှဈမွောကျပွညျထောငျစုနအေ့ား ကွိုဆိုဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ မွနျမာ-ဗီယကျနမျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ စတုတ်ထမွောကျအျောပရတော တဈခုဖွဈသော Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) ၏ First Call Announcement အခမျးအနားကို ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ Kempinski Hotel ၌ကငျြးပပွုလုပျရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တကျရောကျသညျ။
အဆိုပါအခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong ၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခငျမောငျစိုးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဖိတျကွားထားသညျ့ ဧညျ့သညျတျောမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက အဖှငျ့အမှာစကားပွောကွားရာတှငျ မိမိတို့နိုငျငံတှငျ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားကို ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိစှာ ဆောငျရှကျခဲ့ရာတှငျ ပွညျပအျောပရတောနှဈခုဖွဈသညျ့ Ooredoo Myanmar Ltd ၊ Telenor Myanmar Ltd နှငျ့ ပွညျတှငျးအျောပရတောမြားဖွဈသညျ့ MPT နှငျ့ KDDI Summit Global Myanmar Company Limited တို့အား ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျရနျ အကောငျအထညျဖျောပေးခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံတှငျ တိုးတကျလကျြရှိသော လူဦးရနှေငျ့ ပညာရှငျမြား၏အကွံပွုခကျြမြားအရ စတုတ်ထအျောပရတော ဖွဈပျေါလာရေးဆောငျရှကျခဲ့ပွီးနောကျ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) အား စတုတ်ထမွောကျ နိုငျငံအဝှမျးအျောပရတောအဖွဈ လုပျဆောငျနိုငျရနျအတှကျ (Nationwide Telecommunication License)အား သဘောတူခှငျ့ပွုခဲ့ပွီးဖွဈကွောငျး၊ စတုတ်ထမွောကျဆကျသှယျရေး ၀နျဆောငျမှု လုပျငနျးအတှကျ ပွညျပဆကျသှယျရေးကုမ်ပဏီဖွဈသော Viettel Global Investment Joint Stock Company Limited နှငျ့ မွနျမာစီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျးပိုငျ Star High Company နှငျ့ MNTH Public Limited တို့သညျ Joint Venture Agreement ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ ၁ နှဈနှငျ့ ၅ လအတှငျး လုပျငနျးမြားစတငျနိုငျခွငျးသညျ နှဈဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားကို စတေနာအပွညျ့ထားပွီး စိတျအား ထကျသနျစှာ ဆောငျရှကျမှု၏ရလဒျဖွဈကွောငျး၊ ရှိပွီးဖွဈသညျ့ MECTel ၏ အခွခေံအဆာကျအဦမြားကို စနဈတကြ တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ခွငျးသညျလညျး အဓိကအခကျြတဈခုလညျးဖွဈပါကွောငျး၊ ဆကျသှယျရေး လုပျငနျးသညျ နိုငျငံတဈခု၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုကို အထောကျအကူပွုသညျ့ အဓိကလုပျငနျးမြားတှငျ ပါဝငျကွောငျး၊ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ အခြိနျနှငျ့တဈပွေးညီ ကောငျးမှနျစှာ ဆကျသှယျပွောဆို လုပျကိုငျနိုငျခွငျးဖွငျ့ လူမှုစီးပှားမြား လငျြမွနျစှာတိုးတကျလာမညျဖွဈကွောငျး၊ ဆကျသှယျမှုကောငျးမှနျခွငျးဖွငျ့ လူ့ဘဝတိုးတကျမှု အတှကျအသုံးခသြကဲ့သို့ တာဝနျရှိသူမြားကလညျး ဆကျသှယျရေးလုံခွုံမှုကို ဂရုပွုသှားရနျလိုကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ဆကျလကျပွီး ယခုအခါစတုတ်ထအျောပရတောဖွဈသညျ့ Mytel အနဖွေငျ့ ပွညျတှငျး ဆကျသှယျရေး ကဏ်ဍတှငျသာမက ပွညျပအျောပရတောမြားနှငျ့လညျး ခြိတျဆကျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ Corporate Social Responsibility (CSR) လုပျငနျးမြားအနဖွေငျ့လညျး Free Internet မြား၊ Multi Media မြားနှငျ့ Tele-Center မြားဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ အဖှဲ့အစညျးမြားအတှငျး Video Conferences မြား ဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ Operation Smile အမညျဖွငျ့ Charity Program မြားဆောငျရှကျပေးခွငျး စသညျ့ပွညျသူ့အကြိုးပွု လုပျငနျးမြားအား ဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ အခွားလုပျငနျးတူ ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှုကဏ်ဍ မြားတှငျလညျး လကျတှဲပွီးအကောငျးဆုံး ကူညီပံ့ပိုးဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ Mytel ၏ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့အတူ မွနျမာ့လူမှုပတျဝနျးကငျြ ပိုမိုတိုးတကျသညျထကျ တိုးတကျကောငျးမှနျအောငျ ဖွညျ့ဆညျးထောကျပံ့ ပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ယနမွေ့နျမာ-ဗီယကျနမျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခဲ့သညျ့ Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel)အား စတငျပွီး ဆကျသှယျရေးကှနျယကျ တညျထောငျနိုငျခဲ့ကာ မင်ျဂလာရှိသော First Call Announcement Ceremony အခမျးအနားကို ကငျြးပနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့အောငျမွငျစှာ ကငျြးပနိုငျရနျအတှကျ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကွသညျ့ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ဆကျသှယျရေး ၀နျကွီးဌာနဝနျကွီးနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာမြား၊ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး၊ လြှပျစဈနှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီး၊ MIC ဥက်ကဋ်ဌ၊ MIC အတှငျးရေးမှူးနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာမြား၊ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးဒသေအသီးသီးရှိ ၀နျကွီးခြုပျမြားနှငျ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျဝနျကွီးမြား၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန နှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာနဝနျကွီး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး၊ Viettel Group ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား အားလုံးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ ယနတှေ့ငျ (၇၁)နှဈမွောကျပွညျထောငျစုနကေို့ ဂုဏျပွုကွိုဆိုသော အားဖွငျ့ Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) ဆကျသှယျရေးကှနျယကျကို စတငျ ဖှငျ့လှဈမညျ့မင်ျဂလာရှိသော First Call Announcement Ceremony အခမျးအနားကို ကငျြးပနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ခွငျးသညျ မွနျမာနိုငျငံ ဆကျသှယျရေးကဏ်ဍအတှကျ အောငျမွငျမှုတဈခုဖွဈသညျ့အပွငျ နိုငျငံအနဖွေငျ့လှနျစှာအကြိုးရှိသညျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျရှကျမှု၊ IT ၀နျဆောငျမှုမြားကို အထောကျအကူပွု ဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျဖွဈပါကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌဦးခငျမောငျစိုးက ကွိုဆိုနှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားကာ စီမံကိနျးဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေားအား Powerpoint ဖွငျ့ ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။ ဆကျလကျ၍ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌဦးခငျမောငျစိုး နှငျ့ CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Mytel Network အသငျ့ဖွဈနမှေုအား အသိပေးကွငွောရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၊ ပွညျထောငျစု ၀နျကွီးမြားဖွဈကွသညျ့ ဦးသနျ့စငျမောငျ၊ ဦးဝငျးခိုငျနှငျ့ ဦးကြျောဝငျး၊ စဈထောကျခြုပျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong ၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌဦးခငျမောငျစိုးနှငျ့ CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Mytel Network အားစကျခလုတျနှိပျ၍ ခြိတျဆကျမှုဆောငျရှကျပေးကွသညျ။
ဆကျလကျ၍ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဗီယကျနမျကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ထံ Mytel Network ဖွငျ့ Video Call ဖွငျ့ဆကျသှယျချေါဆို၍ နှုတျခှနျးဆကျစကားပွောကွားသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ မွောကျပိုငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျညီညီဆှေ၊ တွိဂံဒသေတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျအောငျဇျောအေးနှငျ့ ကမျးရိုးတနျးဒသေတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျလငျးအောငျတို့အား Video Call ဖွငျ့ဆကျသှယျချေါဆိုသညျ။ ထို့နောကျ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးသနျ့စငျမောငျက Mytel ရနျကုနျရုံးခှဲဒါရိုကျတာအား Mytel Network ဖွငျ့ Video Call ချေါဆိုမှုအား ရုပျပုံနှငျ့အရညျအသှေး ကောငျးမှနျစှာဖွငျ့ ပွုလုပျသညျ။
၎င်းငျးနောကျ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌဦးခငျမောငျစိုး၊ CEO Mr. Nguyen Thanh Nam တို့က Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel)၏ First Call Announcement အခမျးအနားအထိမျးအမှတျတံဆိပျနှငျ့ လကျဆောငျပစ်စညျးမြားအား တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တကျရောကျလာကွသညျ့ ဧညျ့သညျတျောမြားအားပေးအပျပွီး အမှတျတရ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကူးကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) မှပွသထားသညျ့ပွခနျးမြားအား လှညျ့လညျကွညျ့ရှုကွသညျ။ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ၏ Nationwide Telecom လိုငျစငျကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ရရှိခဲ့ပွီး မွနျမာ-ဗီယကျနမျနှဈနိုငျငံ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျခွငျးဖွဈသညျ။ မွနျမာဘကျမှ ပုဂ်ဂလိကအမြားပိုငျအဖှဲ့(၁၁)ဖှဲ့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားရှိပွီးအစုရှယျရာ ၅၁ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နျောဝနေိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ဒုတိယဝနျကွီး(အငွိမျးစား) နျောဝဒေုက်ခသညျကောငျစီ (NRC)၏ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ Mr. Jan Egeland ဦးဆောငျသောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံ တှဆေုံ့